ADY HEVITRA - LALÀM-PIFIDIANANA : Mamofompofona krizy politika ny firenena
Nampandrasina anjara mivantana tamin’ny adihevitra teo anatrehan’ny fahalanian’ilay volavolan-dalàna natao hifehy ny fifidianana hatrehintsika amin’ity taona ity ihany koa ny tanora. 11 avril 2018
Noentina novelabelarina teo anatrehan’ireo mpianatra teny Ankatso ireo andinin-dalàna mandrafitra io lalàm-pifidianana io. Nivoitra nandritra izany fa mamofompofona krizy politika sy korontana eto amin’ny firenena.
Nahitana ireo hery velona isan-tsokajiny teto amin’ny firenena ireo mpandray anjara nitondra ny famelabelarana tamin’ity ady hevitra ity. Nahitana ny avy eo anivon’ny fiarahamonim-pirenena, ny mpanao politika, mpanao gazety ary mpahay lalàna. Nandray ny anjara fitenenany sy ny fomba fahitàny an’iny lalàna iny ny fiarahamonim-pirenena Rohy tamin’ny alalan’ny solon-tenany, Andriatsimarofy Benjamin.
Anisany fanontaniana nisongadina napetrany tamin’izany ny hoe “afaka miantoka fifidianana mangarahara sady eken’ny rehetra ve ny lalàm-pifidianana lany teny anivon’ny Antenimieram-pirenena”. Tsia, avy hatrany ny valiny raha ny fanazavana noentiny. “Sadasada io lalàm-pifidianana io sady tsy mifanaraka amin’ny lalàm-panorenana satria lasa salovanin’ny governemanta ny andraikitry ny Céni kanefa dia mazava ny voalaza ao amin’ny lalàm-panorenana andininy fahadimy sy faharoa manao hoe ny fandaminana sy ny fitantanana ny raharaha rehetra momban’ny fifidianana dia ankinina amin’ny rafitra mahaleo tena iray eto amin’ny firenena.
Tsy mazava ny resaka fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana. Fohy loatra ny fe-potoana hanaovana fampielezan-kevitra. Tsy mazava ny resaka petra-bola takiana amin’ny kandidà hirotsaka hofidiana. Tsy ilaina ny fitakiana biletà n°2 amin’ny taratasy takiana amin’ny firotsahana hofidiana Filoham-pirenena fa ny biletà n°3 dia efa ampy”, hoy ny fiarahamonim-pirenena Rohy raha nitondra ny fanazavany. Raha fintinina teny am-pamaranana ny fanazavana noentiny dia nanamafy ity farany fa tsy hitondra fitoniana eto Madagasikara io lalàm-pifidianana lany io.
Nitondran’ny mpitsara, Rahelimanantsoa Lucette adihevitra sy fanakihanana ihany koa ny mahakasika ireo andininy vitsivitsy ao anatin’ny lalàm-pifidianana izay heveriny fa tsy hitondra filaminana eo anivon’ny fiarahamonina. Ohatra amin’izany ilay andininy mamaritra ireo olom-pirenena tokony ho voasoratra ao anaty lisi- pifidianana. Namarana an’io adihevitra notontosaina teny Ankatso io ny mpikambana eo anivon’ny antoko politika Armada.
Niompana manontolo tamin’ireo dingana natrehan’ny Antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena nandritra ireo atrikasa hanatsarana ny didy aman-dalàna hifehy ny fifidianana ny fanazavany. Ireo soson-kevitra natolotry ny mpisehatra tamin’izany atrikasa izany dia tsy noraisina fa lasa natao sarintsariny fotsiny tao anatin’ilay volavolan-dalàm-pifidianana ireo toromarika miisa 31. Fehiny, tsoa-kevitra goavana teny am-pamaranana an’ity adihevitra ho an’ny tanora ity fa “mila mandray andraikitra ny tanora manoloana ny toe- draharaham-pirenena”.